Miyaan kor u qaadi karaa darajada aan iibsado Amazon ee leh keyword keyword keyword?
Jawaab gaaban waa haa, waxaa suurtagal ah in la kordhiyo darajada iibka Amazon oo leh hab-celinta keyword keyword. Dabcan, marka la maareynayo habka saxda ah. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo inaan la wadaago qaar ka mid ah aqoonta teknoolajiga ee lagama maarmaanka u ah si loo qiyaaso heerka sare ee iibka Amazon - si toos ah adigoo ka faa'iideysanaya ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee ku yaala qaybta taageerada ee qaaska ah ee bogga Amazon ee la yiraahdo "shuruudaha raadinta. "Sidaa daraadeed, waxaad awoodi doontaa inaad hesho qayb ka mid ah gabal yar oo ka mid ah riddada, marka la barbar dhigo kuwa la jilciyey by aad ka soo horjeeda aad u hagaagsan dayacid this xaqiiqda dahabka ah si ay u kordhiyaan darajo iibka Amazon - ku dhowaad waqti lahayn, shaqooyin culus. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan kuu muujiyo sida loo qaabeeyo loona hagaajiyo liiskaaga Amazon ee qaybta keyword keyword.
Talooyin ku Saabsan Isticmaalka Xayeysiinta
Ma ogtahay in ay jiraan xeerar gaar ah oo ay Amazon ku bixiso - si sax ah loogu talagalay qaybta taageerada ee liiska? Hayso wax walba meelahan soo socda, waxaana jiri lahaa sabab kale oo wanaagsan oo A9 ah si loo kordhiyo darajadaada Amazon.
Waa inaad isticmaashaa oo kaliya meelaha si loo kala saaro erey kasta oo muhiim ah qaybtaada dambe ee laga soo xigtay. Waxaan ula jeedaa in calaamadaha kale ee la midka ah sida finanka ama semicolons aan loo ogoleyn halkaa.
Eray kasta oo muhiim ah ama weedha dheer raadinta waa in lagu qeexaa nidaam cad oo macquul ah si ay ugu muujiyaan hab si buuxda loo akhriyi karo. Tusaale ahaan, halka caddayn cad sida "roogga weyn ee casaanka" waa mid fiican, wax walboo "roogga cas ee weyn" marnaba kuma fiicnaan doono liiska alaabta.
Waxaad xor u tahay inaad isticmaasho jumlada saxda ah (tusaale, magacyada buugta, filimada, iwm. ), iyo sidoo kale wixii kale ee la aqbalo. Maxay tahay in laga hortago
Waxay u egtahay mid aan maskaxda ku hayn, laakiin iska hubi inaadan haysan wax khaas ah oo aan sax ahayn, aan sax ahayn, backend listing qaybta "ereyada muhiimka ah. "Waxaan loola jeedaa in aanad marnaba u soo dirin liiskaaga wax soo saarka qaybta khaldan ee aan khaldan ahayn, isticmaal erey aan habooneyn (bannaanka), jinsi aan sax ahayn, iyo wixii la mid ah. Isticmaalka UPC-yada, walaxda ASIN, magacyada waxyaallaha ama wixii kale ee aqoonsi kale waa mid aan loo baahnayn in lagu arko ereyada muhiimka ah.
Abuuritaanka wax kasta oo dheer oo dheeraada ayaa kaa dhigi doona waxyeello dheeraad ah, intii aad kordhi lahayd darajadaada Amazon.
Isticmaalka erayada su'aalaha sida "tayada quruxda badan", ama ereyo kale oo faahfaahsan oo faahfaahin iyo weedho ah sida "heshiis fiican," "qiimo jaban" laguma talinayo sidoo kale.
Wax la mid ah waxay ku saabsantahay hadal kasta oo ku-xidhan, sida "iibka", "alaab cusub oo la heli karo," "stock stock limited".
Dhamaan ficilada ficilada ama ereyga ah ee dabiiciga ah ee xad-gudubka ah ayaa si weyn looga mamnuucay.
Isticmaal ujeedo leh magacyada walxaha la duubay maaha wax kale oo aan ahayn fikrad aad u xun (xitaa haddii ereyadaas la tirtiray ama odhaahyadu yihiin erayo muhiim ah).
Marka lagu daro nooc kasta oo isbeddel ah, sida foomamka jumlad / jamac ah ama siyaabo kala duwan oo loo yaqaan "capitalization" laguma xisaabin doono faa'iidadaada Source .